Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » UK manalefaka ny lalàna miditra ho an'ireo vahiny vita vaksiny tanteraka
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
UK manalefaka ny lalàna miditra ho an'ny vahiny vita vaksiny
Ny rafitry ny jiro fifamoivoizana ankehitriny dia hosoloina lisitra mena iray amin'ireo firenena sy faritany izay hitohy ho zava-dehibe indrindra mba hiarovana ny fahasalamam-bahoaka, ary hanamora ny fomba fitetezam-paritany ho an'ireo tonga eto amin'izao tontolo izao manomboka ny alatsinainy 4 oktobra amin'ny 4 ora maraina.
UK dia hampihena ny fitakiana fitiliana ho an'ireo mpizahatany vahiny vita vaksiny rehefa tonga izy ireo.
Ireo mpandeha feno vaksiny feno vaksiny dia afaka manolo ny andrana faha-2 ataon'izy ireo amin'ny fitsapana mikoriana manaraka kokoa.
Izay manandrana tsara dia mila mitokana avy hatrany ary manao fanamarinana PCR.
Ny sekretera momba ny fitaterana UK Grant Shapps dia nanambara androany fa manomboka amin'ny 4 Oktobra 2021, ny governemanta UK dia manamaivana ny lalàna mifehy sy ny fepetra takiana amin'ireo mpitsidika avy any amin'ny firenena vahiny.
Sekretera fitaterana UK Grant Shapps
Rafitra notsorina vaovao ho an'ny dia iraisam-pirenena raha jerena ny fahombiazan'ny fanolorana vaksinin'ny UK any an-toerana dia hanome fitoniana bebe kokoa ho an'ny indostria sy ny mpandeha.
Ny fepetra fitiliana dia hahena ihany koa ho an'ireo mpandeha vita vaksiny feno, izay tsy mila mandray PDT intsony rehefa mandeha any Angletera manomboka ny Alatsinainy 4 Oktobra 4 maraina.
Manomboka amin'ny faran'ny volana oktobra, ny mpandeha vita vaksiny feno volo sy ireo manana vaksiny nankatoavina avy amina vondron'olona tsy mena mena dia afaka manolo ny andrana faha-2 ataon'izy ireo amin'ny fitsapana mikoriana manaraka kokoa noho ny sisiny, mampihena ny vidin'ny fitsapana rehefa tonga Angletera. Ny governemanta dia te hampiditra izany amin'ny faran'ny volana oktobra, mikendry ny hametraka izany amin'ny toerany rehefa miverina miala sasatra ny antsasaky ny olona.
Izay misedra tsara dia mila mitoka-monina ary manao fanamarinana PCR fanadinana, tsy misy vidiny fanampiny ho an'ilay mpandeha, izay namboarina mba hanampiana azy ireo hamantatra ireo karazany vaovao.
Ny fitsapana ho an'ireo mpandeha tsy voadio avy amin'ny firenena tsy mena dia hahitana fitsapana mialoha ny fiaingana, andro 2 sy andro faha-8 fitsapana PCR. Ny fitsapana ny famotsorana dia mbola safidy iray hampihenana ny fotoana fanokanan-tena.
Ireo mpandeha izay tsy ekena fa vita vaksiny feno amin'ny vaksinina sy mari-pankasitrahana omena ao ambany AngleteraNy fitsipiky ny dia iraisam-pirenena momba ny dia, dia mbola mila manao fitsapana mialoha ny fiaingany, fitsapana PC 2 andro sy andro 8 ary mitokantokana mandritra ny 10 andro rehefa tafaverina avy any amin'ny firenena lisitra tsy mena eo ambanin'ny fandaharam-pizahan-tany vaovao misy ambaratonga roa. . Ny fitsapana ny famotsorana dia hijanona ho safidy ho an'ireo mpandeha tsy vita volo izay maniry ny hanafohezana ny fotoana fitokanan'izy ireo.
“Manamora ny fitsangatsanganana izahay. Manomboka amin'ny Mon 4 Oktobra, raha feno vax [vaksinina] ianao dia tsy mila fitsapana mialoha ny fiaingany alohan'ny hahatongavanao any Angletera avy amin'ny firenena tsy mena ary manomboka ny volana Oktobra dia ho afaka hanolo ny andrana PCR andro 2 miaraka amin'ny fikorianan'ny sisiny mora kokoa, ”hoy ny siokantsera Grant Shapps nisioka.
Sajid Javid, sekretera momba ny fahasalamana sy sosialy, dia nilaza hoe: "Androany dia notsotsoranay ny lalàna momba ny dia mba hahamora kokoa ny fahazoana sy ny fanarahana azy ireo, fanokafana ny fizahan-tany ary hampihena ny vidiny mankany ivelany.
"Raha mbola mihazakazaka ny ezaka fanaovam-baksiny eran'izao tontolo izao ary maro ny olona no voaro amin'ity aretina mampatahotra ity, marina ny hitohizan'ny lalàna sy ny lalàna mifehy antsika."
Andriamatoa Daniel Pimental hoy:
September 26, 2021 ao amin'ny 07: 04
Ny rafitry ny jiro fifamoivoizana ankehitriny dia hosoloina lisitra mena iray amin'ireo firenena sy faritany izay hitohy ho zava-dehibe indrindra mba hiarovana ny fahasalamam-bahoaka, ary hanamora ny fomba fitetezana ny fahatongavan'ireo olona eran'izao tontolo izao. Tena ilaina ho antsika izy io.